ओलीलाई सर्वसम्मत बनाउन लागे रावल समुहकै यी नेता, १० भाई मध्यका यी ८ नेता फर्किए ओलितिरै ! – GALAXY
ओलीलाई सर्वसम्मत बनाउन लागे रावल समुहकै यी नेता, १० भाई मध्यका यी ८ नेता फर्किए ओलितिरै !
काठमाडौं – नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा भिम रावल र घनश्याम भुसालले अध्यक्षपदमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका बेला उनकै समूहबाट बिरोध हुन थालेको छ। नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पार्टीको महाधिवेशनमा प्यानलगत चुनाव नहुने भन्दै घुमाउरो तरिकाले बिरोध गरेकी हुन्ब
अघिल्लो महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर निर्वाचनमा जाँदा पार्टीलाई ठूलो नोक्सान पुगेको उनको भनाइ छ । “हामी हिजो प्यानलगत चुनावमा गयौँ । अत्यन्तै दुःखलाग्दो स्थिति बन्यो । प्यानलगत चुनाव नगरौँ, नगरौँ भन्दा पनि हामी गयौँ । धैर्यता राख्न सकेनौँ,” उनले भनिन् “त्यसले पार्टीलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍यायो ।
अब प्यानलगत चुनाव कुनै पनि हालतमा हुँदैन । सर्वसम्मत समहमतिका साथ नेतृत्व चयन हुन्छ । साक्यको यो भनाईले रावल र भुसाललाई झन् चुनौती थपिएको छ। उता योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे लगाएतका नेताहरु ओली क्याममा लागिसकेको अवस्था छ यदि यो अवस्थामा रावल वा भुसाल जो उठेपनि बिजोग हुने निश्चित बनिसकेको छ। यसै पनि एमालेमा यिनीहरु कम्जोर छ।
रघुजी पन्तलाई ओलीले दिए यस्तो पद
‘हो, तपाईँले उपाध्यक्ष पद डिजर्भ गर्नुहुन्छ’, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै पन्तले सुनाए। तर, ओलीले ‘उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुस्, सकेको सहयोग गर्छु’ चाहिँ भनेनन्। तैपनि, ओलीले सकरात्मक जवाफ दिएपछि पन्त उत्साहित भएका छन्। र, महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धाका लागि दृढ देखिएका छन्।
पन्त यसअघि २०७१ साल असार तेस्रो हप्ता भएको नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा ९ सय ६९ मत ल्याएर पराजित भएका थिए। सो पदमा घनश्याम भुषाल र विष्णु पौडेलले बाजी मारेका थिए।